Miverimberina ny Youtube - Mametaka horonan-tsary Youtube mora foana - Mihainoa mozika tsy mitsahatra
Avereno ny horonantsary Youtube tsy manery ny famerenam-bola
Loanina ny lahatsary YouTube amin'ny fomba mora indrindra. Mampiasa ny Loop YouTube azonao averina mamerina ny horonantsary manontolo na misafidy ampahany aminy, mikatsaha ao amin'ny YouTube, manomboka video marobe amin'ny fotoana mitovy!
Mikarata na manao Youtube Repeat.
Avereno atao an-tsary feno na ampahany amin'ny YouTube amin'ny alàlan'ny YouTube Loop
Ny Youtube Repeater dia ahafahan'ny olona manintona horonan-tsary YouTube na ampahan'ireo horonan-tsarimihetsika efa voafetra miaraka amin'ny tsindry vitsy monja amin'ny totozy. Avereno tsy an-kiato ireo horonan-tsary mozika, fizahana horonan-tsary mampihomehy, na horonan-tsary mahafinaritra toy ny doro tanety na aquarium, ary zarao amin'ny namanao!
Ahoana ny fomba hamerenana mamerimberina lahatsary YouTube
Rehefa ilaina ny horonan-tsarimihetsika YouTube amin'ny lanonana tsy misy fetra
∞ Rehefa mijery horonan-tsarimihetsika YouTube torolalana ianao dia mila mijery azy manokana miverimberina.
∞ Rehefa maheno mozika iray mampiavaka ianao dia tokony hihaino hatrany miverimberina ...
∞ Rehefa mila mijery an'io horonantsary mahatsikaiky izany mandritra ny fotoana 1000 ianao nefa tsy manana hetsika amin'ilay fitaovana.
∞ Rehefa te-hijery horonan-tsary YouTube tsy misy doka.
Bokotra avereno amin'ny Youtube
Makà bokotra averin'ny Youtube ho an'ny Chrome, Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge.
∞ Avereno ny Youtube ← Tsindrio izany amin'ny bara tsoratadidy
❝Ity script ity dia manampy anao handefa horonan-tsary YouTube.❞
Ho fanamorana kokoa, soraty izahay!
Mampiasa YouTube Loop azonao atao
Avereno, tapaka sy lela
Ampidiro ny lahatsary YouTube manontolo na asio fiverimberina ireo, dia zarao amin'ny namanao ny famoronana anao!
Avereno mandeha ho azy ireo horonan-tsarimihetsika YouTube (na ampahany fotsiny amin'izy ireo).
Zahao miverimberina foana ilay horonan-tsarinao YouTube tsy misy manery ny famerenany.
Tapaka, tapaka ho lela tsy manam-petra
Mamorona Loop, zahao ny ampahany tianao amin'ny horonan-tsary iray ary milalao feno na ampahany amin'ny horonan-tsarimihetsika YouTube ao anaty tadidy tsy manam-petra.
Amboary ny fotoana ny loadinao (manomboka / fiafarana)
Fanohanana ireo takelaka YouTube.
Mamorona ny Playlists tsy misy fidirana.
Mihemotra na mamerina amin'ny laoniny ny mpilalao.
Miverim-peo ny Youtube kilalao, ahosotra na avereno ny lisitra Youtube.
Mifehy ireo horonan-tsarimihetsika YouTube.
Mijery ny Youtube amin'ny efijery tsy misy doka amin'ny solosaina sy finday.
Niova ho azy ny fitaovana mba hifanaraka amin'ny efijery fitaovana
Hafainganam-pandeha haingana na midina moramora
Mampihena ny hira Youtube na manafainganana horonan-tsary.
Ampio ny bokotra fandefasana horonantsary.
Hanova ny lohateny alohan'ny fizarana.
Ny traikefa mpampiasa
Mikaroka horonantsary YouTube amin'ny fomba milamina.
Tsy misy doka manelingelina.
Tohanana ny Platform tiana rehetra
Azonao atao ny mampiasa YouTube Looper amin'ny sehatra tianao indrindra toy ny fitaovana Windows, Linux OS, milina Mac, Chromebook, Android na iPhone, iPad, Smart TV.
Haingana sy maimaim-poana tsy tezitra.
Izany dia serivisy maimaim-poana amin'ny serivisy an-tserasera ampiasaina.
Tsy misy kaonty, tsy misy download, mozika fotsiny.
Horonan-tsary Youtube mora foana - Mihainoa mozika tsy mitsahatra
Ahoana ny fomba famerimberenanao ireo horonan-tsary YouTube
Misy fomba ahafahana manelingelina ny fetra famerenam-bokatra amin'ny YouTube
Mikatsaha ny horonan-tsary tianao indrindra na ampidiro ny URL YouTube (na vidéo ID) tianao hampiasaina ao anaty boaty fidirana etsy ambony. Na ampiasao jerena ny Youtube averimberina eto ambany.
Hisolo ny taratasy t amin'ny alàlan'ny taratasy x ao amin'ny sehatra Youtube dia manindry Enter. Hiverina amin'ny feon-tsy tapaka ny horonantsary.
- Horonan-tsary tsy tapaka hita ao amin'ny Youtube
- Rohy misy ny firenena (uk, jp, ...)
- URL nohafohezina
Ahoana ny fomba fanaovana horonantsary YouTube izay milahatra tsy tapaka
YouXube dia ahafahanao manamboatra Loop hamerenany horonantsary feno na ampahany iray aminy. Mba hamoronana Loop dia azonao atao ny misafidy ilay horonantsary amin'ireto fomba manaraka ireto:
Dingana voalohany: Fidio ny video
Avy amin'ny URL iray
Mba hamerenako ireo horonan-tsarimihetsika YouTube, mametà fotsiny URL video YouTube ao amin'ny faritra fikarohana.
Avy amin'ny valin'ny fikarohana
Raha tsy azonao antoka hoe video inona no tadiavinao ny Loop, dia afaka mitady video YouTube. Ao amin'ny pejy manaraka ahitanao ny valin'ny karoka ahazoanao misafidy horonantsary tianao.
Dingana roa: Manapaka
Ampidiro ny horonantsary Youtube eo anelanelan'ny fe-potoana
Misafidiana ny fanombohana / famaranana
Rehefa avy naka ny horonan-tsarinao ianao dia afaka manova ny fotoana manomboka sy faran'ny. Tsindrio fotsiny ilay fanombohana sy famaranana ireo tondro amin'ny fotoana tianao. Ankehitriny afaka mamerina ny lahatsary YouTube tianao ianao.
Raha tsorina, manomboka ny fotoana fanombohana / fahataperan'ny fotoana.
Dingana telo: Amboary ny lohatenin'ilay horonantsary
Azonao atao koa ny miverina anarana amin'ny Loop amin'izay rehetra tianao. Manokatra Loop voavonjy, manova ny anarana ary kitiho ny bokotra Save.
Dingana efatra: Manamboara lakolosy lahatsary
Azonao atao ny mizara ny horonantsary YouTube am-pitiavana amin'ny media sosialy tianao indrindra toy ny: Facebook, Twitter, Pinterest, email, ary na WhatsApp na text message aza.
Alohan'ny fizaranao dia mamorona sary thumbnail Youtube ho anao mba hahafahanao hahaliana ny olona.
Raha hampiasa ny Loop YouTube dia tsy maintsy manana browser navigatera HTML5 ianao.
Jereo eto ny fanontanianao sy ny valinteninao - Ahoana ny fomba handraisana ny Youtube Youtube?
+ Inona ny atao hoe Loop YouTube?
Izy io dia fitaovana iray izay milalao horonan-tsarimihetsika YouTube ao anaty tadidy tsy misy fetra, inona no dikan'izany: manomboka manomboka amin'ny fomba mandeha ho azy ny video nefa tsy misy fidirana an-tsehatra aorian'ny farany.
+ Ahoana ny famerenana na horonan-tsary horonantsary?
Ny fahazoana YouTube miverimberina amin'ny fantsom-pifandraisana iray dia mety ho toy ny asa fototra, saingy mahagaga fa tsy maintsy atao ary mety handiso fanantenana ny mpijery maro.
Soa ihany, misy fomba telo tsotra ampiasàna ny horonan-tsarimihetsika mozika YouTube na horonan-tsarimihetsika tianao indrindra, ary maimaimpoana tanteraka izy ireo ary miara-miasa amin'ny sehatra rehetra, ao anatin'izany ny solosaina iPhone sy Android ary Windows, Mac, ary Linux.
• Fomba 1. Ao amin'ny YouTube: tsindrio havanana ny varavarankelin'ny horonan-tsary ary tsindrio ny Loop
• Fomba 2. Amin'ny YouXube:
- Mikaroka horonan-tsary miaraka amin'ny alàlan'ny boaty fidirana amin'ny tampon'ny pejy, avy eo misafidiana horonantsary iray amin'ny lisitry ny valiny.
- Adikao ny horonan-tsary YouTube izay tianao horesahina ary apetraho ao anaty vata fampidirana eo an-tampon'ny pejy ny URL misy ny infinion, ary hosodiho ny kisary tsy manam-petra ∞
- Adikao ny ID ny horonan-tsary izay tianao haterina ary apetraho ao amin'ny boaty fidirana ao amin'ny tampon'ilay pejy ny ID an'ny horonan-tsary ary avy eo tsindrio ny kisary tsy manam-petra ∞
• Fomba 3: Apetaho ny rindran-kira ho an'ny mozika maimaim-poana amin'ny iPhone, iPad, na iPod touch (misy koa ireo averin'ny YouTube ho an'ny fitaovana Android).
+ Ahoana ny fomba famoahana horonan-tsary YouTube amin'ny Internet Browser?
Misy fomba iray ve ahafahana mijery horonantsary YouTube amin'ny haingam-pandeha noho ny hafainganam-pandeha 2x?
⓵ Amin'izao fotoana izao, YouTube no manafaingana ny fihodinana video in-2.
⓶ Tsindrio havanana ny faritra horonan-tsary, na tsindry lava raha mampiasa efijery fanindriana ianao.
⓷ Safidio ny Loop avy amin'ny menio.
Manomboka amin'ity teboka ity dia hirotsaka tsy an-kijanona ny horonan-tsary mandra-panaisanao ny endri-tadivavarana, izay azonao atao amin'ny famerenana fotsiny ireo dingana etsy ambony hanongotana ny safidin'ny lo, na amin'ny famelomana indray ny pejy.
+ Ahoana ny fomba hamehezana ny horonan-tsary YouTube amin'ny iPhone na iPad nefa tsy mametraka ny fampiharana?
Amin'ny solosaina desktop na solosaina, YouTube dia ahafahanao mamerina miverimberina horonan-tsary jerenao. Manampy izany, misy serivisy malalaka maimaim-poana, afaka manampy anao amin'ny famerenana ireo horonan-tsary.
Raha te-hanandrana fomba hafa amin'ny famoahana horonan-tsary YouTube amin'ny solosaina ianao na mampiasa fitaovana toy ny smartphone izay tsy mampiseho ny safidy menu miafina, ny tranonkala YouXube dia safidy tsara.
YouXube dia tranonkala maimaimpoana izay ahafahan'ny olona manomboka mamerina an-tserasera YouTube amin'ny alàlan'ny fampidirana ny URL misy azy ao amin'ny sehatry ny fikarohana azy fotsiny. Ny tsara indrindra, izany dia azo atao amin'ny navigateur tranonkala amin'ny fitaovana rehetra.
+ Ahoana no fomba andikana sy mametaka URL YouTube amin'ny fitaovana finday?
Amin'ny solosaina iray, azonao atao ny mandika haingana ny rohy miaraka amin'ny zotra fohy amin'ny fitendry Ctrl + C ary apetaho ny làlan-kitendry misy làlana fohy Ctrl + V.
Amin'ny fitaovana finday, manindry ary mihazona ary avy eo misafidy safidy ny kopy na apetaka.
+ Mpiara-miasa amin'ny YouTube ve ity pejy ity?
Ity pejy ity dia tsy misy ifandraisany amin'ny YouTube.
Io tranonkala io dia tsy mpiara-miasa amin'ny Youtube ary tsy fomba ofisialy ireo hilalao amin'ny lahatsary YouTube averimberina, fa fomba fahatelo fotsiny izany.
+ Azo antoka ve ny fampiasana ity serivisy averin'i YouTube ity?
Ny fiarovana no laharam-pahamehana indrindra eto amintsika, noho izany ny fifamoivoizana amin'ny angonin'ity tranokala ity dia voahodina SSL. Miaraka amin'ity protocol tambajotra azo antoka ity, voaaro amin'ny fidiran'ny ankolafy ny angon-drakitrao.
+ Mivadika amin'ny horonantsary YouTube ve ianao, raha mijery azy ianao?
Avereno atokana indray ny tranonkalanao.
Zahao ny fampiasana ny CPU amin'ny solosainao na ny telefaona na ny tablette. Raha hitanao fa avo loatra (mihoatra ny 80%) dia andramo hamono ireo dingana sasany, na avereno indray ny fitaovanao.
Raha azo atao dia mifindra amin'ny kalitao ambany kokoa amin'ny horonantsary YouTube (480p na ambany).
+Ahoana ny fomba hijerena ireo horonan-tsary YouTube amin'ny Slow Motion na Motion haingana?
Ahoana ny fomba hanovana ny hafainganam-pandehan'ny horonantsary amin'ny Youtube?
Araho ireto dingana ireto
Sokafy ny horonantsary YouTube ao amin'ny browser
Tadiavo eo ambany farany ambany amin'ny mpilalao amin'ny cog fanovana (mety hiteny HD ambonin'izany izy io)
Tsindrio ilay safidy hafainganam-pandeha (tokony ho mahazatra amin'ny default izany)
Fidio ny hafainganam-pandehan'ny playback
Mihetsika ny hetsika: 0.25, 0.5, 0.75
Mitombo ny hafainganam-pandeha: 1.25, 1.5, 2
Raha tsy izany dia afaka manokatra ilay horonan-tsary ao amin'ny Youxube ianao, izay manana bokotra roa hampitomboana na hampihena ny hafainganam-pandehan'ny mpandrindra.
Io ihany koa ny valin'ny fanontaniana mitovy amin'izany.
Ahoana ny fomba hanafainganana na hampihena ny horonan-tsarimihetsika YouTube?
Ahoana ny fijerena horonan-tsary YouTube amin'ny hafainganam-pandeha haingana kokoa?
Azontsika atao ve ny mitombo amin'ny safidy hafainganam-pandehan'ny lalao?
Ahoana ny fomba hilalao horonantsary YouTube amin'ny Slow Motion na Motion haingana?
+ Ahoana ny fomba hanafainganana ireo horonantsary YouTube (2x, 3x ary mihoatra ny 4x)?
Amin'izao fotoana izao, YouTube no manafaingana ny fihodinana video in-2.
+ Ahoana ny fomba hanovana ny hafainganam-pandeha YouTube Playback amin'ny Android sy iPhone?
Alohan'ny hanombohantsika dia ataovy azo antoka fa handeha amin'ny App Store na Google Play ianao ary manavao amin'ny dikan-tsarimihetsika farany farany an'ny YouTube.
Sokafy ny horonantsary YouTube amin'ny fampiharana
Kitiho ny horonan-tsary mba ho hitanao ny bokotra rehetra nalaina teo amin'ny efijery
Kitiho ny teboka 3 eo amin'ny zoro havanana havian'ny efijery. Ity dia hanokatra seho amin'ny horonan-tsarimihetsika.
Ao amin'ny lisitry ny fisafidianana, tap ny Playback Speed. Tokony hapetraka amin'ny Normal amin'ny alàlan'ny default.
Fidio fotsiny ny hafainganam-pandehanao, ary ianao rehetra dia nametraka.
Rehefa ao amin'ny telefaona finday na iPhoneo, raha misafidy hilalao horonan-tsarimihetsika YouTube ao amin'ny tranonkala finday ianao (m.youtube.com) fa tsy solosaina finday voajanahary, dia afaka manova ny sehatra YouTube ho lasa YouXube ianao.
+ Ahoana no fomba hamehezana ny horonantsary youtube amin'ny teboka iray?
Ahoana no ampidiranao ny horonantsary Youtube misy ny fotoana?
Sariho ny seho ao amin'ny Youtube repeater mba hamatsy ampahany amin'ny lahatsary fotsiny.
+ Ahoana ny fomba hialana am-pilalaovana Youtube amin'ny finday?
Sokafy ny lisitry ny YouTube rehetra ao amin'ny browser
Ovaho ny domaine YouTube ho YouXube ary napetraka daholo ianao.
Fitaovana horonan-tsary YouTube tsotra
Ny famoronana Loop dia tsy mora kokoa! Mamelà famerenam-bola amin'ny lahatsary YouTube mandeha ho azy na ampahany aminy ...
Ny hevitra momba ny mpampiasa
Afa-potoana lehibe, ny tadivavarana no fanampiana tsara indrindra hianarana ireo ampahany amin'ny hira na hira na hira.
Mpahay mpikaroka amin'ny fiteny, London
Io ihany no notadiaviko namerimberina mozika rehefa niara-nilalao tamin'ny fanazaran-tena aho. Ny endri-javatra fifampizarana dia ho tsara hizara fizarana lahatsary amin'ny hafa amin'ny vondrona mpianatra / tarika / klioba.
Mpampianatra eny amin'ny lise, Paris
Mampiasa ity fampiharana ity aho mba hamoronana kilalao ho an'ny fahazarana fanazaran-tena. Azonao atao ny mamerina iray track iray na misafidy milalao auto izay ahafahanao mihaino ny mozika rehetra ao amin'ny lisitra. Fampiharana azo itokisana.
Mpandinika amin'ny fiarovana ny fampahalalana, Silicon Valley
Tiako ny fomba ahafahanao manamboatra fantsom-potoana eo anelanelan'ny fotoana manokana amin'ilay horonan-tsary! Mazava ho ahy ny ampahany tiako indrindra amin'ny fampiharana.
Tiavo ity fampiharana ity! Manamora ny hira tiako indrindra izy io!
Mpanolotsaina ara-bola, Amsterdam
Ny tena ilaiko. Amin'ny maha mpianatra mpianatra mozika ahy dia afaka mihaino hira aho miezaka ny hianatra amin'ny resaka tsy mila mikapoka imbetsaka.
Tiako ny fomba raha lava kokoa noho ny tianao izany ny horonantsary iray dia afaka hamafa izany. IZAHO IZAO IZY. Tsy misy glitches na doka, tsy misy antony tsy itiavako azy.
Ity dia fampiharana lehibe miasa izay mitovy amin'ny voalaza. Faly be aho amin'io ary manoro hevitra aho.
Ny mozika tiako sy mametaka azy ireo ao anaty paosy fotsiny dia mahafaly ahy ary manampy ahy haka aina.
mpahay matematika, Barcelona
Tiavo ity fampiharana ity dia manampy be dia be rehefa tsy afaka mahita dikan-teny tianao amin'ny YouTube ianao misaotra anao noho ny nanaovana ity fampiharana ity.
Mpisolo vava, Sydney
Hatreto, izany indrindra no tena ilaiko mba mitokana sy fanazarana ny ampahany amin'ny gitara.
psikology, Rio De Janeiro
Mankasitraka ireo devs ity fampiharana mahafinaritra ity, mampalahelo fa tsy manohana ny endri-javatra ny YouTube fa fisaorana noho ny nanaovana ity fampiharana ity.
Solosaina lozisialy informatika, San Francisco
Tsara ho an'ireo vao manomboka satria azon'izy ireo mamoha azy io ary hianatra mora foana ilay hira
Miasa tsara ho an'ny horonan-tsary rehetra fa tsy mozika fotsiny.
Miverimberina tsy mijanona izany ka afaka matory tsara aho
Masinina fiara, Toronto
Tena tsara amin'ny fiteny sy ny fianarana koa. Azoko atao ny mifehy ny hafainganam-pandehan'ny lalao na ny fanapahan-kevitra.
Ny fizarana ity tranonkala ity dia famporisihana ny rindranasa hampivelatra endri-javatra mahasoa maro hafa